Statmux ကို AWS Elemental MediaLive တွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ - NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Statmux ကို AWS Elemental MediaLive တွင်ရနိုင်သည်
Statmux ကို AWS Elemental MediaLive တွင်ရနိုင်သည်
တစ်ဦးအဖြစ် အမေဇုံက Web Services က ကုမ္ပဏီ, AWS ဒြပ်စင် MediaLive နက်ရှိုင်းသောဗွီဒီယိုကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူများကိုလျင်မြန်သော / ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော software အခြေပြုဗွီဒီယိုအပြောင်းအလဲနှင့်ဖြန့်ဝေပေးသည့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးစွမ်းနိုင်အောင်တိမ်တိုက်၏စွမ်းအားနှင့်စကေးနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ AWS ဒြပ်စင် MediaLive ဖောက်သည်များအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အခါ ၀ န်ဆောင်ခနှင့်လစာနှင့်အတူလိုအပ်သည့်အခါလိုအပ်သောအခါ Cloud ၏ elasticity ကိုလုံလောက်စွာအသုံးချနိုင်သည်။
AWS Elemental MediaLive သည် Statmux ကိုကမ်းလှမ်းသည်
စာရင်းအင်း Multiplexing (Statmux) နှင့်အတူယခုရရှိနိုင်ပါသည် AWS ဒြပ်စင် MediaLiveနှင့်ဤအထူးနည်းပညာကိုထုတ်လွှင့်သည့်လုပ်ငန်းအသွားအလာများတွင်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုလိုင်းများအကြားတွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီ bits ခွဲဝေချထားပေးသည်။ အကြောင်းကြီးစွာသောအရာ Statmux ဆိုလိုသည်မှာသတ်မှတ်ထားသောစုစုပေါင်း bandwidth အတွင်းလိုင်းအုပ်စုတစ်စုအတွက်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကွန်ယက်၏ထိရောက်မှုကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ အသုံးပြုခြင်း AWS ဒြပ်စင် MediaLive ဖောက်သည်များအတွက် linear video processing and playout ကို Statmux ဖြင့်ခွင့်ပြုသည် AWS တိမ်တိုက် ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ကေဘယ်လ်၊
နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်သူများကဲ့သို့သောမီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အကြောင်းအရာများကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏ဖြန့်ဖြူးသောမိတ်ဖက်များနှင့်တစ်ပြိုင်နက်မျှဝေခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ အစဉ်အလာအားဖြင့်၎င်းကိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောမြေပြင်ပေါ်ရှိဟာ့ဒ်ဝဲကုဒ်များကို အသုံးပြု၍ ဖြန့်ဖြူးရန်လမ်းကြောင်းများပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ဤစနစ်များကိုရယူရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်လများစွာကြာနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်ရန်ကျယ်ပြန့်သောအင်ဂျင်နီယာလိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် AWS Elemental MediaLive တွင် Statmux ရှိပြီးဖြစ်သောရုပ်သံလွှင့်သူများနှင့်အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများကအပြည့်အဝစီမံထားသော AWS ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ထုတ်လွှင့်သည့်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုတည်ဆောက်ပြီးစီမံနိုင်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော။
AWS ဒြပ်စင် MediaLive နှင့် Statmux အကျိုးခံစားခွင့်များ
Statmux နှင့်အတူ AWS Elemental MediaLive ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများမှာထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်။
Cloud ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အသုံးပြုသူကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောပရိသတ်နှင့်စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းများကိုထည့်သွင်းရန်၊ ဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် codec အသစ်များကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးသည်၊ အရင်းအမြစ်များကိုတစ် ဦး ချင်းဆက်သွယ်မှုအခြေခံအရ ဦး စားပေးပြီးသုံးစွဲသူအနေဖြင့်မျိုးစုံ codecs နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူနိုင်စေသည်။
ပါ ၀ င်သည့်ဒဏ်ခံနိုင်မှု - မြင့်မားသောရရှိမှုနှင့်အပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲမှု failover အတွက်အရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးမျိုးသောရရှိနိုင်မှုဇုန်များအကြားအလိုအလျောက်ခွဲဝေချထားပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးမြင့်: Statmux ပါ ၀ င်သည့် AWS Elemental MediaLive သည်အသုံးပြုသူများအားဗီဒီယိုအရည်အသွေးမြင့်မားစေပြီးပုံသေသတ်မှတ်ထားသည် ဂြိုဟ်တု သို့မဟုတ် cable ကိုဖြန့်ဖြူး bandwidth ကို။ အသုံးပြုသူများသည်အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးသောချန်နယ်များသည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင်ပြတ်တောက်မှုမရှိဘဲအရည်အသွေးချိန်ညှိချက်များကိုညှိနိုင်သည်။
စစ်ဆင်ရေးအတွက်ထိရောက်မှုဖြေ - ထုတ်လွှင့်မှုဖြန့်ဝေတဲ့အလုပ်ပမာဏကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းတည်ဆောက်ပေးတယ်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဟာ့ဒ်ဝဲမပါဘဲပြီးမြောက်ပြီး၎င်းသည်ပုံသေကွန်ယက် bandwidth တစ်ခုမှလိုင်းများကိုပိုမိုထိရောက်စွာပို့ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်မက်ထရစ်များ ပေါင်းစည်းထားသောအမေဇုံတိမ်တိုက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီဗွီဒီယိုမက်ထရစ်နှင့် Multiplexer စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
စုစည်းထားသည့်ခေါင်းစီး: encoding များအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သော system တစ်ခုရှိခြင်းသည်လုပ်ဆောင်မှုများကိုရိုးရှင်းစေသည်. Unified headend သည်ဓာတ်ပုံထဲသို့ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် AWS Elemental MediaLive အတွက် Statmux နှင့်အတူ၊ ရိုးရာထုတ်လွှင့်မှုဗီဒီယိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် multiscreen linear video ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အတူဗိသုကာတစ်ခုတည်းမှအကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများကိုကူညီနိုင်သည်။
AWS မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများ မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အစိုးရအေဂျင်စီများအပါအ ၀ င်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ချရသောထုတ်လွှင့်သည့်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုဖန်တီးနိုင်သည့် cloud ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ AWS မီဒီယာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဗွီဒီယို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်စျေးကွက်တုန့်ပြန်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်အဆုံးမှအဆုံးသို့အပြန်အလှန်ဗွီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်တစ် ဦး ချင်းအစိတ်အပိုင်းများ / ဆောက်လုပ်ရေးအုတ်မြစ်များအဖြစ်ချထားသည်။ Pay-as-you-go စျေးနှုန်းသည်အသုံးပြုသူအားဗီဒီယိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိရန်အချိန်ကိုမြန်ဆန်စေခြင်းနှင့်အရင်းအနှီးမပါဘဲကြည့်ရှုသူများပြားလာခြင်းကိုအလွယ်တကူစီမံနိုင်သည်။
ကနေဖြေရှင်းချက် AWS ဒြပ်စင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသောငွေကြေးအမြောက်အများကိုစိတ်ကြိုက်ထုတ်လွှင့်သည့်တီဗွီနှင့်မျက်နှာပြင်ကျယ်ဗီဒီယိုများခွင့်ပြုပါ။ ၎င်းကသုံးစွဲသူများအားဗီဒီယိုလုပ်ငန်းများအားချွေတာနိုင်စေရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့်အပြင်ပိုမိုအရေးကြီးသောအရာများကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်ထူးခြားသောအတွေးအခေါ်များကိုကြည့်ရှုသူများအားဆွဲဆောင်နိုင်သောဆွဲဆောင်မှုရှိသောအကြောင်းအရာအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
AWS ဒြပ်စင်နည်းပညာများ ရုပ်မြင်သံကြားအော်ပရေတာများ၊ ထုတ်လွှင့်သူများ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအတွက်မှီခိုအားထားရလောက်သော၊ AWS Elemental သည်မီဒီယာအတွေ့အကြုံကိုမည်သို့ပြည့်စုံကောင်းမွန်စေကြောင်းလေ့လာပါ ဒီကိုဆက်သွယ်ပါ.
သုံးစွဲသူများသည်အချိန်ကိုမည်သို့ချွေတာသည်၊ overhead ကိုလျှော့ချခြင်း၊ တန်ဖိုးနည်းသော cloud အရင်းအမြစ်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ AWS Elemental MediaLive နှင့် Statmux တို့ဖြင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်းစသည်တို့အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက aws.amazon.com/medialive/features/statmux.
အမေဇုံက Web Services က AWS တိမ်တိုက် AWS ဒြပ်စင် AWS ဒြပ်စင် MediaLive ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Cloud ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Statmux သိုလှောင်ခြင်း က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-12-01
ယခင်: အရည်အသွေးအာမခံချက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ - HLS Video Delivery
နောက်တစ်ခု: ကွန်ယက်စစ်ဆင်ရေးစင်တာ (NOC) အင်ဂျင်နီယာ